Waa maxay ROE? o Ku laabo Kheyraadkaaga | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
XIGASHO, Waxay ku qoran tahay Isbaanish: Ku noqo sinnaanta, kaas oo hela magaca loo soo gaabiyo Ingiriisiga, "Ku Laabashada Sinnaanta " Waxay u shaqeysaa sida mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo falanqaynta dhaqaalaha faa iidada ay shirkaddu leedahay.
2 Sideed u xisaabin kartaa ROE?
3 Codsiyada kala duwan ee ROE
4 ROE aragtida shirkadda
5 Qaaciddada Dupont
5.1 Waa kuwan shanta qaybood ee ROE sida ku cad qaaciidada Dupont
6 Waxaan ku soo gabagabeyn karnaa ROE
ROE waa halbeeg shaqadiisu tahay duubista waxqabadka helay saamile leh ixtiraam lacagaha aad haysato rogay bulsho gaar ah. Tan waxaan ula jeedaa in ROE ay cabireyso suurtagal ah awood in shirkadda laga hadlayo ay leedahay, in mushahar dhaqaale ahaan si saamileyda inay iska kaashadaan tan.
Saamilayaashu way awoodaan falanqayn Adoo adeegsanaya halbeeggan, ka waxqabadka del magaalada inay u adeegsadeen maalgashi iyo, sidan, hubin la jiritaanka inaad ku haysato lacagahaaga shuraakadaas ama aad ka fadhiisato ka hor inta aanu markabku quusin.
Sideed u xisaabin kartaa ROE?
Ku noqo sinaan ama XIGASHO, wuxuu si toos ah ugu dhigmaa boqolleyda lagu helo qaybinta faaiidada saafiga ah canshuuraha kadib inta u dhaxaysa ka lacag u gaar ah.
Macaashka saafiga ah canshuurta kadib
Lacag iska leh
Qaacidadan ayaa sidoo kale loo fahmi karaa a cabiraadda sida shirkad gaar ahi u maal gasho qadar cayiman oo maaliyadeed si ay u soo saarto dakhli ku habboon.
El XIGASHO Waxay ku leedahay codsiyo qaybo kala duwan, shirkadaha waawayn oo dhami way istcimaalaan wayna u shaqaysaa si aad u fiican si loo xaqiijiyo inay jirto faa iido saafiya ka dib markay maalgashi ku sameeyeen mashruuc cayiman
Waxay awoodaan saameyn arrimo badan markii xisaabiso si ku filan faa iidadan, laakiin sababaha ugu waaweyn iyo kuwa ma-guurtada ah ee xisaabinta ayaa horeyba laguu tusay, u isticmaal inay yihiin halbeeg aan lagaraneynin si loo xaqiijiyo mustaqbalka iyo suurtogalka mustaqbalka ee maalgashigaaga.
Codsiyada kala duwan ee ROE
El XIGASHO waa laga codsan karaa dos aragtiyo kala duwan, kan ah maalgashi, iyo tan empresa waxaad heli doontaa isla sidan.
ROE marka laga eego aragtida maal-gashiga
El XIGASHO Saameyn ahaan faa'iido ahaan, waxay noqotay mid ka mid ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay isbadalka ku habboon ee hufan ee shirkadaha. Saamilayda waxaa aad uga muhiimsan in ROE ay ka sareyso in ay jirto faa iido sare marka loo eego shuruudaha saxda ah.
Tan iyo markii XIGASHO waa tilmaam aad u badan waxtar leh, ee ku saabsan shirkadda ay ka tirsan tahay maal gasho waa maaraynta y abuurid faa'iido leh caasimada leh dhigid dhexdeeda, sidaa darteed, waa a halbeegga aad muhiim u ah oo loo baahan yahay in laga fiirsado shaki la'aan, haddii aad rabto inaad sameyso maalgashi dhexdhexaad ah iyo waqti dheer ah, si laguu siiyo raadinta y xaqiijinta maalgashigaaga.
ROE aragtida shirkadda
Sababta maamulaha taas oo maareeyayaasha maaliyadeed ee a empresa waxay isticmaalaan XIGASHO waa taas ogow Sidee tahay isticmaalka las maalgelin wada-hawlgalayaasha iyo sida loo abuuro ugu fiican guulaha. Intaas waxaa sii dheer, tirooyinka wanaagsan ee halbeeggan, ku meelee shirkad kasta boos wanaagsan ka hor suuq caalami ah, tan iyo intii ka sii badan sare noqo XIGASHO, sare Waxay noqon doontaa faa'iido leh in shirkaddu yeelan karto, iyadoo kuxiran kheyraadka u gaarka ah ee loo adeegsado maalgelinta.
Taasi waa in la yiraahdo XIGASHO waxay shirkadda ku meeleeyaan nooc ka mid ah darajada kalsoonida adduunka, taas oo shirkadaha leh indhoolayaasha ugu sarreeya XIGASHO, hel maalgashadayaasha ugu waaweyn kana iibi saamiyadooda ugu fiican qiimaha maalinba maalinta ka dambeysa, hase yeeshe haddii cabirradu hoos u dhacdo, ayaa kalsooni of the maalgashadayaasha, ayaa sidoo kale hadheeyay, sidaa darteed saamiyada shirkaddu hoos ayey u dhigayaan qarashkooda, maalgashadayaasha wax badan ku bixiyayna, waxay luminayaan lacag. Markaa waxaa muhiim ah in tixraacani markasta kor loo qaado lana hirgeliyo siyaasado shaqo oo abaabulan iyo wax soo saar saaxiibtinimo leh.
SWR sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in la isbarbar dhigo faa'iido leh Inta udhaxeysa shirkadaha isla qeybta, waa in la ogaadaa in isbarbardhiga shirkadaha u dhexeeya qeybaha kala duwan ay horseedi karto natiijooyin liita, maadaama soo noqoshada raasumaalka dhaqaalaha had iyo jeer ay ku kala duwan yihiin waqtiga iyo qaabka ay ku xiran tahay qeybta ay ka tirsan yihiin.
Si loo sameeyo falanqeyn aasaasi ah oo shirkadeed, XIGASHO waa halbeeg aan la iska indho tiri karin, waxtarkiisu wuxuu ku egyahay qaybo badan iyo xirfadlayaal, muhiimada ay leedahay XIGASHO Su'aal kama taagna xilligan, joogitaankeedu waa mid aad u cad, mustaqbalka guusha ee ay gaareen shirkado badan oo casri ah oo si la yaab leh u koray dhowr sano, kiisaska sida Facebook, YouTube, Snapchat, iyo kuwo kale.
Markaan xisaabeyno ROE ee shirkad la siiyay, waxa aan runtii qiyaaseyno waa awooda ay bulshada u leedahay inay macaash ugu soo saarto saamilayda.
ROE waxay siisaa saamilayda qalab lagu falanqeeyo faa'iidada waxay ka heleen maaliyaddii ay maalgashadeen, sidaa darteed waxay ku baari doonaan natiijadan haddii ay caqli gal tahay sii wadista maalgashiga. Si loo tixgeliyo in shirkaddu si wanaagsan u shaqeyneyso, ROE waa inay ka badisaa faa'iidada ugu yar ee saamile ahaan looga baahan yahay inuu maalgeliyo ganacsi gaar ah.
Waxay sidoo kale ka shaqeysaa in lagu cabbiro waxtarka bulshada ganacsi, taas oo ah, xaddiga faa'iidada ay ka hesho ilaha la maalgeliyey. Tusaale ahaan, shirkad leh ROE oo ah 30%, sidaa darteed waxay heshaa 30 yuuro oo cusub oo faa iido ah, 100 euro kasta oo la maalgashado.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu raaco isbeddelka shirkadda iyo, marka lagu daro, waxay u oggolaaneysaa isbarbardhigga tirakoobka waxayna muujineysaa sida loo isticmaalo ilaha shirkadda. Markay sare u kacdo ROE, waxay si toos ah u kordhin doontaa faa'iidada ay shirkaddu bixin karto, sidaas darteed, waxay u noqon doontaa mid soo jiidasho leh maalgaliye kasta.
Donaldson Brown Taasi waa sababta 1912 aad naftaada u weydiisay su'aal aad isweydiineysid waqtigaan: Haddii ROE shirkadeed ay ka kororto 8% ilaa 12% ... maxay u dhacday, maxaa yeelay waxay kordhiyeen 20% haysashada saafiga qiimaha joogtada ah?
Taas ayaa ah sababta Donaldson ay ugu talagashay in ay u kala jabiso qaaciddada shan qaybood oo kala duwan.
Waa kuwan shanta qaybood ee ROE sida ku cad qaaciidada Dupont
[NI / EBT]: Xiriirka ka dhexeeya faa iidada saafiga ah iyo faa'iidada kadib markii lagu daray canshuuraha. La xidhiidha dhinaca maaliyadeed.
[EBT / EBIT]: Xiriirka ka dhexeeya faa'iidada ka hor de canshuur iyo faa iidada ka hor de danaha. La xidhiidha mugga ay shirkaddu deyn ku leedahay, iyo sidoo kale danaha ay bixisay.
[EBIT / Iibinta] Waxay mas'uul ka tahay dejinta xiriirka inta u dhaxaysa las iibinta iyo natiijada de las hawlaha. Dejinta xuduudaha macaashka ganacsiga.
[Iibka / Hantida] Ma tahay tirada jeer ee iibku sameeyay daboolayaa hantida guud. Taas oo laxiriirta heerka dhaqdhaqaaqa bulshada ee ay shirkaddu leedahay. Fikrad xoogaa ka adag, laakiin waxay noqotay soo noqoshada raasumaalka, taasi waa, wixii aad maalgashatay waxaa lagu soo ceshaday waqti cayiman.
[Hantida / Sinaanta]. Waxay si toos ah ula xiriirtaa tirada jeer sinaantaasi waxay kujirtaa hantida. Waxay la xiriirtaa heerka deynta iyo deynta shirkadda.
Si loo sii caddeeyo, aan eegno tusaale mala awaal ah. Ka soo qaad in Juan uu haysto € 200.000. Kuwaas € 200.000 wuxuu ku iibsadaa guri kireysanaya € 20.000 canshuurta kadib. Juan's ROE markaa waa 10%.
Juan ayaa markaa go'aansaday inuu deyn kula galo laba guri oo dheeraad ah si uu ugu kireeyo qiimo isku mid ah. Sidaa darteed, wuxuu deyn ku yeelan doonaa 400.000 euro, oo ay tahay inuu bixiyo 5% dulsaar ah. Faa'iidada saafiga ah waxay noqon doontaa 40.0000 [60.000 oo dakhli ah (20.000 euro guri kasta oo kiro ah) wax ka yar 20.000 euro oo dulsaar ah].
Juan's ROE wuxuu ka soo gudbay 10% ilaa 20%.
Akhlaaqda tusaalaha: Waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho deynta si loo falanqeeyo ROE.
Waxaan ku soo gabagabeyn karnaa ROE
Waxay u shaqaysaa sidii qalab maaliyadeed iyo halbeeg isbarbardhig loogu talagalay ganacsatada iyo maalgashadayaasha, kuwaas oo dhaqaalahoodu ka muuqdo iyadoo kuxiran xaddiga XIGASHO in kuwani ay leeyihiin, markay kordhiyaan lacagtaan, fursadaha ay shirkaddu kaga dhex muuqan karto suuqa adduunka sidoo kale way kordhayaan, maaddaama ay iyagu isu dhigayaan inay yihiin shirkad la isku halleyn karo, halkaasoo laga yaabo in maal-gashadayaasha raaxo leh oo ammaan ah, la socota khatarta hoose.
El ka yar Khatartu waa waxa maal-gashadayaashu had iyo jeer raadinayaan, sidaas darteed XIGASHO wuxuu u hadlayaa shirkadaha, ma ahan xayeysiin ama iibin, haddii uusan aheyn saadaasha shirkadaha ee mustaqbalka, halkaasoo saadaashu ay tahay meesha ugu horeysa ee dhaqaalaha, haddii aadan isku dayin inaad saadaaliso waxa suuqa ka dhici doona, waxaad sii ahaan doontaa talaabo ka soo noqo inta kale ee maalgashadayaasha iyo shirkadaha la cusbooneysiiyay.
Sidoo kale waxay si aad ah faa'iido u leedahay kor u qaadista qiimaha saamiyada shirkadda, haddii ay ROE ee shirkaddu way kordheysaa, waxay sidoo kale kordhisaa qiimaha ganacsi ee saamiyadeeda saami ahaan.
Shaki la'aan waa mid ka mid ah xuduudaha ugu waxqabadka badan si loo ogaado utility-ga aad haysato ee ku saleysan maalgashigaaga, iyo sidoo kale inaad isbarbar dhig ku sameyso xaaladaha hal shirkad iyo mid kale, ama inaad abuurto muuqaal wanaagsan iyo kalsooni soo jiidaneysa maalgashadayaasha, Hadda oo aad leedahay bartay adeegsiga ROE, ka faa'iideyso iyaga si aad u dejiso wadada ganacsigaaga ama maalgashigaaga saxda ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Siyaasadda lacagta » Waa maxay ROE?
Qoraallada ganacsiga: maalgashi ka faa iideysi badan